13 ဇန်နဝါရီ၊ 2022
အရှေ.တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေး ရွေ.ဆိုင်းလိုက်ရတာက၊ ကိုဗစ်လှိုင်းသစ်အောက် ခရီးသွားအခက်ကြောင့်လို့ တရားဝင်ပြောထားပေမဲ့ တခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်မူတွေရှိနေပါတယ်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အာဆီယံ ဥက္ကဌသစ် ဖြစ်လာအပြီး ပထမဆုံးလုပ်မဲ့ လူကိုယ်တိုင်တက် အစည်းအဝေးကို ရှေ.အပတ် ပြင်ထားတာကနေ၊ အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘောဒီယားခေါင်းဆောင်သွားအပြီးမှ ရွေ.လိုက်ရတာကလည်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
ဒီအကြောင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး ပါမောက္ခ Panitan Wattanayagorn ကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရပ်ရွန်ချန်အိုချာ ရဲ့ လုံခြုံရေးအကြံပေး Panitan Wattanayagorn က ဘာကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းရသလဲဆိုတာအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
Panitan Wattanayagorn ။. ။ ဝန်ကြီးအသီးသီးမှာမတူတဲ့ အဖြေတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပပေးမဲ့ ဥက္ကဌနိုင်ငံ ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကတော့ ယျေဘူယျအဖြေအနေနနဲ့ Omicron ဗိုင်းရပ်စ် ပျံနှံ့တဲ့လှိုင်းသစ်အပေါ် စိုးရိမ်မူကြောင့်လို့ အဖြေပေးထားပြီးပါပြီ။ဒီ ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်ကြောင့် တချို.နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ လာတက်ဖို့ အခက်အခဲရှိနိုင်မယ်လို့ ပြောထားပါတယ်၊ဒါက တရားဝင်အဖြေပါ။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ အဲဒီတော့ တရားဝင်မပြောတဲ့ တခြားအကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်တာကို အရင်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ချွန်လီပိုင် ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ Panitan ကိုမေးရာမှာ
Panitan ။. ။ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် တချို.နိုင်ငံတွေပေါ့နော်၊ ကမ္ဘောဒီးယားအပါအဝင်ပါ၊ လာမဲ့အစည်းအဝေးအတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်ပိုလိုချင်ကြပုံရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်ရဲ့ မြန်မာခရီးစဉ်အပြီးမှာက အာဆီယံအတွက် အရင်နှစ်နဲ့မတူတော့ဘဲ ချည်းကပ်ပုံပြောင်းသွားလို့ပါ။ဒီအပေါ် အာဆီယံ တချို.နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ နောက်အပတ်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင် ဆွေးနွေးအမြင်ဖလှယ်တာတွေလုပ်ပြီး၊ လာမဲ့အစည်းအဝေးကနေ ပိုရလဒ်ကောင်းထွက်စေနိုင်ဖို့လည်း ပါနိုင်ပါတယ်။အခုဟာက အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ နေ့တိုင်းနီးပါး ထိခိုက်သေဆုံးရမူတွေ၊ နောက်ဆက်တွဲဆိုကျိုးတွေ၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တာတွေ၊ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်တာတွေ မတည်ငြိမ်မူတွေက ပိုဆိုးလာပါတယ်။ဒါကြောင့် အခုက အာဆီယံအတွက် အလေးအနက်ပိုစဉ်းစားဖို့ လိုလာပါတယ်။နိုင်ငံတကာကလည်း မနှစ်ကနဲ့ မတူဘဲ အခုအာဆီယံဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ ပိုအလေးထား စောင့်ကြည့်မျှော်လင့်လာနေတဲ့အနေအထားလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အဲတော့ ရှေ့ဘာဆက်ဖြစ်နိုင်မေးရာမှာ ချူလာလောင်ကွန်း တက္ကသိုလ်က နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမောက္ခလည်းဖြစ်တဲ့
ဒေါက်တာ Panitan က အခုလိုပြောပါတယ်။
Panitan ။. ။ ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်ရဲ့ ခရီးစဉ်ကနေ ဆွေးနွေးချက်အသစ်တွေ ချည်းကပ်မူပုံစံအသစ်တွေကို ဆွေးနွေးလာနိုင်ဖို့အတွက် လမ်းဖွင့်ပေးလာပါစေလို့ မျှော်လင့်ကြည့်ရအောင်ပါ။ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးချည်းကပ်မူပုံစံ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ မသိနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ သိထားတာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ အလုပ်ကောင်းကောင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊နောက် မြန်မာပြည်က လူအများကြီးအတွက် လူသားချင်းစာနာမူဆိုင်ရာအကြပ်အတည်းကြီး ကျရောက်လာနေတာအတွက် အချိန်က သိပ်မကျန်တော့ဘူးဆိုတာကို သိထားပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေ အကူအညီရဖို့ ပို ပို လိုလာနေပါတယ်၊ ကဏ္ဍပေါင်းစုံအတွက်ပါ။ လုံခြုံရေး၊ စီးပွားရေး ဖူလုံရေးတွေလည်းပါပါတယ်။အခြေအနေတစ်ခုလုံးက ပိုအလေးထားစာရာဖြစ်လာနေပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အရင်ချည်းကပ်ပုံဖြစ်တဲ့ စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ နဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို အာဆီယံအစည်းဝေးတက်ခွင့်မပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး က အရေးပေါ်ရေကြီးနေတာကြောင့်မလာနိုင်တာတာပါလို့ South China Morning Post ကို ပြောပါတယ်။ မလေးရှားအပြင် အင်ဒိုနီးရှား၊ဘရှုနိုင်း၊စင်္ကာပူတို့ကလည်း အရင်ချည်းကပ်မှုပုံစံကို ထောက်ခံခဲ့ကြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ လူသိရှင်ကြားမပါခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခုပုံစံကို ထပ်မေးရာမှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အကြံပေး Panitan က
Panitan ။. ။ ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်ရဲ့ ခရီးစဉ်မှာ အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ ချည်းကပ်မူက အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ နိုင်ငံရေးအရ ပါဝင်နိုင်မဲ့ ပါတီအဖွဲ့တွေ ပိုများလာဖို့ပါ။မနှစ်တုံးကနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင်ပေါ့နော်။မနှစ်တုံးကတော့ အဓိက ၂ ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ စစ်တပ် ရော NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပါ မဖိတ်ခဲ့ပါဘူး။အခု ချည်းကပ်မူအသစ်အပေါ် တခြားအာဆီယံအဖွဲ့တွေက နောက်ဆုံး ဘယ်လိုသဘောထား ဆုံးဖြတ်ပေးကြမလဲဆိုတာကတော့ မသိသေးပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးရဦးမှာပါ။ဒါပေမဲ့ သိထားပြီးတာက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုံးက နိုင်ငံရေးအရကိုယ်စားပြုမူကို ဘေးဖယ်ထားခဲ့တာကနေ ဘယ်လိုရလဒ်ကောင်းမှ မထွက်စေခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကို ကြည့်လိုက်ပါ၊ ခုလိုဖယ်ထုတ်ထားလိုက်လို့ အခြေအနေတွေ ပိုကောင်းမလာပါဘူး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ နောက်ဆုံးဘယ်လိုများအကြံပြုချင်ပါလဲလို့မေးရာမှာ
Panitan။. ။ အခုအခြေအနေက အရေးပေါ်သဘော အမြန်ဆုံး လုပ်ကြရမှာပါ။အာဆီယံထဲက ပြည်သူအများစုအနေနဲ့ အခုအာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ အစည်းအဝေးကနေ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီ အကြပ်အတည်းကနေ လွတ်မြောက်စေနိုင်ဖို့ ပို ထိရောက်တဲ့ အားလုံးက လက်ခံနိုင်တဲ့ မူဝါဒအဖြေရလဒ်မျိုးထွက်လာဖို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။အထူးသဖြင့် လူသားချင်းစာနာမူဆိုင်ရာ အကြပ်အတည်းကြီးက လွတ်နိုင်ဖို့ပါ။မြေပြင်မှာ ခံစားနေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အချိန်ကုန်နေပါပြီ။ သူတို့ တကယ်ခံစားနေရတာပါ၊နေ့စဉ်အသက်တွေဆုံးနေရပါတယ်။ဒီအပေါ် အာဆီယံ ဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ လိုနေပါပြီ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တကယ်တော့ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ အခုမြန်မာပြသာနာလိုအရေးကြီးပြသာနာမှာ လူချင်းရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ သုံးသပ်နိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ASEAN ဝနျကွီးအစညျးအဝေးရှဆေို့ငျးတာ မွနျမာပွဿနာကွောငျ့လား
အရှေ.တောငျအာရှနိုငျငံမြားအဖှဲ့ အာဆီယံနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအစညျးအဝေး ရှေ.ဆိုငျးလိုကျရတာက၊ ကိုဗဈလှိုငျးသဈအောကျ ခရီးသှားအခကျကွောငျ့လို့ တရားဝငျပွောထားပမေဲ့ တခွားအကွောငျးတှလေညျးရှိနိုငျတယျလို့ သုံးသပျမူတှရှေိနပေါတယျ။
ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံ အာဆီယံ ဥက်ကဌသဈ ဖွဈလာအပွီး ပထမဆုံးလုပျမဲ့ လူကိုယျတိုငျတကျ အစညျးအဝေးကို ရှေ.အပတျ ပွငျထားတာကနေ၊ အခုတော့ မွနျမာနိုငျငံကို ကမ်ဘောဒီယားခေါငျးဆောငျသှားအပွီးမှ ရှေ.လိုကျရတာကလညျး အကွောငျးရငျးတဈခုဖွဈနိုငျတယျလို့ သုံးသပျသူတှကေ ဆိုပါတယျ။
ဒီအကွောငျး ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျရဲ့ လုံခွုံရေးဆိုငျရာ အကွံပေး ပါမောက်ခ Panitan Wattanayagorn ကို ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။.။ ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျ ပရပျရှနျခနျြအိုခြာ ရဲ့ လုံခွုံရေးအကွံပေး Panitan Wattanayagorn က ဘာကွောငျ့ရှဆေို့ငျးရသလဲဆိုတာအခုလိုရှငျးပွပါတယျ။
Panitan Wattanayagorn ။. ။ ဝနျကွီးအသီးသီးမှာမတူတဲ့ အဖွတှေရှေိနိုငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အိမျရှငျအဖွဈကငျြးပပေးမဲ့ ဥက်ကဌနိုငျငံ ကမ်ဘောဒီးယားဘကျကတော့ ယဘြေူယအြဖွအေနနေနဲ့ Omicron ဗိုငျးရပျဈ ပြံနှံ့တဲ့လှိုငျးသဈအပျေါ စိုးရိမျမူကွောငျ့လို့ အဖွပေေးထားပွီးပါပွီ။ဒီ ကိုဗဈမြိုးကှဲသဈကွောငျ့ တခြို.နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးတှေ လာတကျဖို့ အခကျအခဲရှိနိုငျမယျလို့ ပွောထားပါတယျ၊ဒါက တရားဝငျအဖွပေါ။
ကိုဝငျးမငျး ။.။ အဲဒီတော့ တရားဝငျမပွောတဲ့ တခွားအကွောငျးရငျးဖွဈနိုငျတာကို အရငျထိုငျးဝနျကွီးခြုပျ ခြှနျလီပိုငျ ရဲ့ ပွောခှငျ့ရသူ Panitan ကိုမေးရာမှာ
Panitan ။. ။ ကြှနျတျောထငျပါတယျ တခြို.နိုငျငံတှပေေါ့နျော၊ ကမ်ဘောဒီးယားအပါအဝငျပါ၊ လာမဲ့အစညျးအဝေးအတှကျ ပွငျဆငျဖို့ အခြိနျပိုလိုခငျြကွပုံရပါတယျ။ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဝနျကွီးခြုပျ ဟှနျဆနျရဲ့ မွနျမာခရီးစဉျအပွီးမှာက အာဆီယံအတှကျ အရငျနှဈနဲ့မတူတော့ဘဲ ခညျြးကပျပုံပွောငျးသှားလို့ပါ။ဒီအပျေါ အာဆီယံ တခြို.နိုငျငံတှအေနနေဲ့ နောကျအပတျအစညျးအဝေးမတိုငျခငျ ဆှေးနှေးအမွငျဖလှယျတာတှလေုပျပွီး၊ လာမဲ့အစညျးအဝေးကနေ ပိုရလဒျကောငျးထှကျစနေိုငျဖို့လညျး ပါနိုငျပါတယျ။အခုဟာက အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ နတေို့ငျးနီးပါး ထိခိုကျသဆေုံးရမူတှေ၊ နောကျဆကျတှဲဆိုကြိုးတှေ၊ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျတာတှေ၊ ထိနျးမနိုငျသိမျးမရဖွဈတာတှေ မတညျငွိမျမူတှကေ ပိုဆိုးလာပါတယျ။ဒါကွောငျ့ အခုက အာဆီယံအတှကျ အလေးအနကျပိုစဉျးစားဖို့ လိုလာပါတယျ။နိုငျငံတကာကလညျး မနှဈကနဲ့ မတူဘဲ အခုအာဆီယံဘာလုပျနိုငျမလဲဆိုတာ ပိုအလေးထား စောငျ့ကွညျ့မြှျောလငျ့လာနတေဲ့အနအေထားလညျး ဖွဈနပေါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အဲတော့ ရှဘေ့ာဆကျဖွဈနိုငျမေးရာမှာ ခြူလာလောငျကှနျး တက်ကသိုလျက နိုငျငံရေးသိပ်ပံပါမောက်ခလညျးဖွဈတဲ့
ဒေါကျတာ Panitan က အခုလိုပွောပါတယျ။
Panitan ။. ။ ဝနျကွီးခြုပျ ဟှနျဆနျရဲ့ ခရီးစဉျကနေ ဆှေးနှေးခကျြအသဈတှေ ခညျြးကပျမူပုံစံအသဈတှကေို ဆှေးနှေးလာနိုငျဖို့အတှကျ လမျးဖှငျ့ပေးလာပါစလေို့ မြှျောလငျ့ကွညျ့ရအောငျပါ။ဒါပမေဲ့ နောကျဆုံးခညျြးကပျမူပုံစံ ဘယျလိုဖွဈလာမလဲဆိုတာတော့ မသိနိုငျသေးပါဘူး။ဒါပမေဲ့ သိထားတာကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ဆုံးဖွတျခကျြကတော့ အလုပျကောငျးကောငျးမဖွဈခဲ့ဘူး၊နောကျ မွနျမာပွညျက လူအမြားကွီးအတှကျ လူသားခငျြးစာနာမူဆိုငျရာအကွပျအတညျးကွီး ကရြောကျလာနတောအတှကျ အခြိနျက သိပျမကနျြတော့ဘူးဆိုတာကို သိထားပါတယျ။မွနျမာပွညျသူတှေ အကူအညီရဖို့ ပို ပို လိုလာနပေါတယျ၊ ကဏ်ဍပေါငျးစုံအတှကျပါ။ လုံခွုံရေး၊ စီးပှားရေး ဖူလုံရေးတှလေညျးပါပါတယျ။အခွအေနတေဈခုလုံးက ပိုအလေးထားစာရာဖွဈလာနပေါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အရငျခညျြးကပျပုံဖွဈတဲ့ စဈကောငျစီဥက်ကဌ နဲ့ခေါငျးဆောငျပိုငျးကို အာဆီယံအစညျးဝေးတကျခှငျ့မပေးတာနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ မလေးရှားနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး က အရေးပျေါရကွေီးနတောကွောငျ့မလာနိုငျတာတာပါလို့ South China Morning Post ကို ပွောပါတယျ။ မလေးရှားအပွငျ အငျဒိုနီးရှား၊ဘရှုနိုငျး၊စင်ျကာပူတို့ကလညျး အရငျခညျြးကပျမှုပုံစံကို ထောကျခံခဲ့ကွပွီး ထိုငျးနိုငျငံကတော့ လူသိရှငျကွားမပါခဲ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အခုပုံစံကို ထပျမေးရာမှာ ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျအကွံပေး Panitan က
Panitan ။. ။ ဝနျကွီးခြုပျ ဟှနျဆနျရဲ့ ခရီးစဉျမှာ အသဈဖွဈလာတဲ့ ခညျြးကပျမူက အာဆီယံဆှေးနှေးပှဲတှမှော နိုငျငံရေးအရ ပါဝငျနိုငျမဲ့ ပါတီအဖှဲ့တှေ ပိုမြားလာဖို့ပါ။မနှဈတုံးကနဲ့ယှဉျလိုကျရငျပေါ့နျော။မနှဈတုံးကတော့ အဓိက ၂ ဖှဲ့ဖွဈတဲ့ စဈတပျ ရော NLD အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျကိုပါ မဖိတျခဲ့ပါဘူး။အခု ခညျြးကပျမူအသဈအပျေါ တခွားအာဆီယံအဖှဲ့တှကေ နောကျဆုံး ဘယျလိုသဘောထား ဆုံးဖွတျပေးကွမလဲဆိုတာကတော့ မသိသေးပါဘူး။ ဒီနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးတှအေစညျးအဝေးမှာ ဆှေးနှေးရဦးမှာပါ။ဒါပမေဲ့ သိထားပွီးတာက ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတုံးက နိုငျငံရေးအရကိုယျစားပွုမူကို ဘေးဖယျထားခဲ့တာကနေ ဘယျလိုရလဒျကောငျးမှ မထှကျစခေဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့ မွနျမာနိုငျငံအခွအေနကေို ကွညျ့လိုကျပါ၊ ခုလိုဖယျထုတျထားလိုကျလို့ အခွအေနတှေေ ပိုကောငျးမလာပါဘူး။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ နောကျဆုံးဘယျလိုမြားအကွံပွုခငျြပါလဲလို့မေးရာမှာ
Panitan။. ။ အခုအခွအေနကေ အရေးပျေါသဘော အမွနျဆုံး လုပျကွရမှာပါ။အာဆီယံထဲက ပွညျသူအမြားစုအနနေဲ့ အခုအာဆီယံ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးတှေ အစညျးအဝေးကနေ မွနျမာနိုငျငံ ဒီ အကွပျအတညျးကနေ လှတျမွောကျစနေိုငျဖို့ ပို ထိရောကျတဲ့ အားလုံးက လကျခံနိုငျတဲ့ မူဝါဒအဖွရေလဒျမြိုးထှကျလာဖို့ မြှျောလငျ့ထားကွပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ လူသားခငျြးစာနာမူဆိုငျရာ အကွပျအတညျးကွီးက လှတျနိုငျဖို့ပါ။မွပွေငျမှာ ခံစားနရေတဲ့ မွနျမာပွညျသူတှအေတှကျ အခြိနျကုနျနပေါပွီ။ သူတို့ တကယျခံစားနရေတာပါ၊နစေ့ဉျအသကျတှဆေုံးနရေပါတယျ။ဒီအပျေါ အာဆီယံ ဝနျကွီးတှအေနနေဲ့ အမွနျဆုံး လုပျဆောငျပေးနိုငျဖို့ လိုနပေါပွီ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျတော့ အာဆီယံခေါငျးဆောငျတှအေနနေဲ့ အခုမွနျမာပွသာနာလိုအရေးကွီးပွသာနာမှာ လူခငျြးရငျးရငျးနှီးနှီးတှေ့ သုံးသပျနိုငျတယျလို့ ပွောဆိုနကွေပါတယျ။
ကမ္ဘောဒီးယား ဝန်ကြီးချုပ်ကြောင့် အာဆီယံကြိုးပမ်းမှုတွေ ထိခိုက်ရကြောင်း APHR ဝေဖန်
မြန်မာခရီးစဉ်အပေါ် ဝေဖန်မှုအတွက် ကမ္ဘောဒီးယား ကာကွယ်ပြောဆို
အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေး ရွှေ့ဆိုင်းထား